လေ့ကျင့်ခန်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
⛳ လေ့ကျင့်ခန်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ⛳
တစ်ခုခုလိုချင်ရင် တစ်ခုခုပြန်ပေးရတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ကျန်းမာအသက်ရှည်ဖို့အတွက် ဘာတွေပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုမလဲ။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် နေထိုင်စားသောက်ရမယ်။ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေမဲ့အရာတွေ ရှောင်ရမယ်။
မျှတသင့်တော်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း လုပ်ပေးရဦးမှာပေါ့။ လူတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဖြစ်ဖြစ်..ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားဖြစ်ဖြစ် ယိုယွင်းပျက်စီးစပြုလာမှ ဒါမှမဟုတ် တော်တော်လေးပျက်စီးသွားမှ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ သတိရကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ်လို့တော့မရှိပါဘူး။ ခုပဲ စလိုက်ပါ။
? လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်လဲ ??
? နံပါတ် တစ် အရေးအကြီးဆုံးက ‘စိတ်ဓာတ်’ပါပဲ။ လုပ်ချင်စိတ်မရှိရင် လေ့ကျင့်ခန်းမှ မဟုတ် ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ Work Out လုပ်ဖို့ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနည်းလမ်းတွေ၊ Gym က အလေးတုံးတွေ၊ ပြေးစက်တွေ၊ စက်ဘီးတွေ၊ လေ့ကျင့်ပေးမဲ့ trainer တွေ ..ဒါတွေကိုလည်း လိုအပ်ချက်တွေလို့ထင်စရာပေမဲ့ မရှိမဖြစ်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
⚽ တကယ် လုပ်ချင်စိတ်ရှိရင် နေရာကျယ်ကျယ်တွေလည်း မလိုပါဘူး။
လူတစ်ကိုယ်စာ မတ်တပ်ရပ်လို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ ခုန်ဆွခုန်ဆွလုပ်ရင်း.. မရွေ့အောင် နေရာတွင်ရပ်အပြေးကျင့်ရင်း..ချွေးတွေရွှဲလာပြီဆို ဒါလည်း လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါပဲ။
⚽ ပြီးတော့ အချိန်လည်း သိပ်များများမလိုလှပါဘူး။
ကြမ်းပေါ်ဝမ်းလျားမှောက် plank ထောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုက တစ်နေ့မှာ တစ်မိနစ်လောက် အချိန်ပေးရုံနဲ့ ဗိုက်အဆီ သိသိသာသာကျစေသလို ပိုကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းလာစေပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပါဆိုတာထက် လုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့က အဓိကလို့ ဆိုချင်တာပါ။ လိုချင်တဲ့ အရာက ပိုများရင်တော့ ပေးရမဲ့ အချိန်တွေနဲ့ တခြားအရင်းအနှီးတွေလည်း ပိုစိုက်ထုတ်ရမှာ သဘာဝပါပဲ။
? နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုကတော့ Sustainablity ဆိုတာပါပဲ။
ကောက်ရိုးမီးလို ဟုတ်ခနဲတောက်ပြီး ဖြုတ်ခနဲ မငြိမ်းသွားဖို့ပေါ့။ အစမှာရှိခဲ့တဲ့ စိတ်တက်ကြွမှုနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းထားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းကို ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရသူတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး နေ့စဉ်တွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့ပါ။
? အသက်အရွယ်အလိုက် လုပ်သင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ??
ငယ်ငယ်တည်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေတယ်။ အရိုးတွေပိုသန်မာစေသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုလည်း ပိုခိုင်မာစေတယ်။ ကြိုက်သလို ပြေးလွှားခုန်ပေါက် ဆော့ကစားပါစေ။ အန္တရာယ် မဖြစ်အောင်တော့ မျက်ခြည်မပြတ် ဂရုစိုက်ပါ။
စာကိုပိုအာရုံစိုက်လာသလို တည်ငြိမ်စပြုလာတဲ့ ဒီအရွယ်ဆို ကစားခုန်စားဘက်မှာ သိသိသာသာ လျော့သွားတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေပေါ့။
ဗြောင်းဆန်အောင် မဆော့ကြတော့ပေမဲ့ ယောကျ်ားလေးတွေကတော့ ဘောလုံးကန်..ပြေးဆော့..ရေကူးလို့ ကောင်းတုန်း။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက်ကတော့ ရေကူး၊ ကြိုးခုန်၊ စက်ဘီးစီး၊ အေရိုးဗစ်၊ zumba အက စတာတွေအပြင် အဖွဲ့လိုက် ဆော့ရတဲ့ အားကစားတွေ ကလည်း သင့်တော်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါပဲ။ ဒီအသက်အရွယ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့် ပိုကျန်းမာစေပါမယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့ အပူအပင်တွေလျော့စေသလို အပျိုကြီးဖားဖားဖြစ်မဲ့အချိန် ကောက်ကြောင်းလှလှလေးတွေ ဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်း ပထမဆုံးစုတ်ချက်တွေပေါ့။
ကြွက်သားတွေဆီ အောက်စီဂျင်ရောက်နှုန်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်တွေက ဘယ်လေကျင့်ခန်းအတွက်မဆို သင့်တော် အကြမ်းခံနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်တာလုပ်ပါ။ လက်ဝှေ့၊ တောင်တက်၊ ပြေး၊ ဘောလုံးကန်၊ ရေကူး၊ ဝိတ်မ..ဘာဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတဲ့ အရွယ်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုပိုများလာပါပြီ။ နှလုံး..သွေးတိုး..ဆီးချို..စတာတွေ ဝင်လာဖို့ စစ်မျက်နှာပြင်နေပါပြီ။ စီးပွားရေးကို အာရုံစိုက်ရင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ ပိုဝေးလေ့ရှိတဲ့ အရွယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ပါ..ပြေးပါ.. စက်ဘီးစီးပါ..Gymသွားပါ.. Yoga ဆော့ပါ..ဂေါက်ရိုက်ပါ။
အားလုံးပြိုကျ ယိုယွင်းနေတဲ့ အရွယ်။ အားအနည်းဆုံးပေမဲ့ အကျန်းမာချင်ဆုံးအရွယ်။ မနိုင်ဝန်မထမ်းမိစေဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ခပ်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်တာ၊ အေရိုးဗစ်ကစားတာလောက်ဆို လုံလောက်ပါတယ်။
? သတိထားရမဲ့ အချက်တွေ ??
ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမဆို မလုပ်ခင် ဗိုက်ပြည့်အောင်မစားပါနဲ့။ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ထားပါ။ အာဟာရပြည့်အောင်စားပါ။ ဆေးလိပ် အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေရှောင်ပါ။ ချွေးထွက်လွန်ရင် ရေဓာတ်ခမ်းရင် ဓာတ်ဆားရည်သောက်ပါ။ ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ပြင်းထန်တဲ့ အားကစားနည်းတွေ လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှောင်ပါ။
ကဲ..ခုပဲစ ကစားပြီး အသက်ရှည်ကျန်းမာလိုက်ကြရအောင်လား..။
ကိုယ်ပူကြီးလို့ ‘တက်’သွား တဲ့ ကလေးတွေ အကြောင်း?